ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: Merry Christmas and A Happy New Year
X’mas cake လား New year cake လား......
တစ်လောက ခင်ရတဲ့ အမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘလော့မှာလည်း ကော်မန့် ပေးဘူးတယ် ဒီအကြောင်းကို
ခုလည်းဘယ်သွားသွား X’mas လက်ဆောင်တွေ အပြိုင်အဆိုင်ဝယ်နေကြတဲ့ အတွဲတွေ ကိတ်ဆိုင်မှာအ်ာဒါမှာနေကြတဲ့သူတွေ ဒါတောင် ဂျပန်မှာ X’mas ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်လာတာ က ၁၀စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော်ပဲ ရှိအုန်းမည်။ အရင်က အိမ်တွေမှာ သိပ်မလုပ်ကြ အဲ့တုန်းက ကိုယ့် hostfamily ကို အမေကြီး ခရစ်စမတ်ကိတ် ၀ယ်ရအောင် စားရအောင်ဆိုတာကို အဖေကြီးက နိုးနိုး ၀ီအာဗုဒစ်လို့ တမင်ပြောပီး မ၀ယ်တာ မှတ်မှိတယ်။ ခရစ်စမတ်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ဆောင်လေးတွေပေးနေကြတာကို မြင်တုန်းက အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်တုန်းက ကြည်ကြည်တစ်ယောက် အတွဲရှိတဲ့သူတွေကို အားကျပီး ကိုယ့်အတွက်လက်ဆောင် ကိုယ့်ဘာသာဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမှာလို့ casher ကိုပြောဘူးတယ် ။ တခြားနိူင်ငံတွေတော့မသိဘူး ဒီမှာက ဆိုင်တွေက ပစ္စည်းဝယ်ရင် အိမ်သုံးလား လက်ဆောင်လားအမြဲမေးတယ် လက်ဆောင်ဆိုရင် ပါကင်လှလှလေးလက်ဆောင်ထုတ်ပေးတတ်ကြတယ်လေ။
ဒီမှာ က single မိန်းကလေးတွေကို X’mas cake က X’mas ကျော်ရင်ရောင်းလို့ မရဘူးနော် ဆိုပီးစလေ့ ရှိတယ်။ သဘောကတော့ သမီးကညာအခါမလင့်စေနဲ့ပေါ့ ..၂၅ကျော်ရင်ရောင်းလို့ မရဘူးပေါ့ အပြောခံရတဲ့သူတွေကလည်းပြန်ပြောတယ် ရတယ် အအေးခန်းထဲထဲ့ထားပီး NewYear Cake ဆိုပီးထပ်ရောင်းမယ်ပေါ့။ NewYear cake ကတော့ ၃၁ ရက်ကျော်ရင်တော့ တစ်ကယ်ကိုပစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပီး ထပ်စကြတယ်။ တစ်ကယ်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် အလှဆုံးဆိုတာ ၃၀ ကျော်မှ ဆိုတာ သူတိ်ု့ မသိကြလေရော့လား…
ကဲဂျပန်က နယူး၇ီးယားအကြောင်း ဆက်ပြောမယ်…
ဂျပန်ရဲ့နယူးရီးယားက ဘာဗျောက်သံ ဘာမီးရှုးမီးပန်းမှမပါပဲ သာမန်အချိန်တွေထက် ပိုပီး ငြိမ်သက်ပါတယ်။ပိတ်ရက်က ၂၉ဒီဇင်ဘာကနေ ဇန်န၀ါရီ ၅ ရက်နေ့ထိ ပိတ်ပါတယ်. တကယ့်ပိတ်ရက်ကတော့ ၃၁ကနေ၅ရက်လောက်အထိပါ။ ဟိုးအရင်တုန်းက များ အကုန်ပိတ် ပထမဆုံးဂျပန်မှာ နှစ်သစ်ကူးတဲ့နှစ်နဲ့ ကြူံတုန်းက ထမင်းငတ်ဘူးတယ်။
ဘဏ်တွေလည်းပိတ် စူပါတွေလည်း ပိတ် အဲ့တုန်းက ခုလို convenience store တွေက ခုလို နေရာတိုင်းသ်ိပ်မတွေ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲထင်ခဲ့ဘူးတာ နိုင်ငံခြားက နယူးရီးယားဆိုတာ မီးတွေထိန်ထိန်လင်းစည်စည်ကားကားထင်တာကိုး ၉၉နောက်ပိုင်းကြတော့ အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး မပိတ်တဲ့ ကုန်တိုက်တွေ စူပါမားကတ်တွေ ရှိလာတယ်။
ဂျပန်ကသက်ကြီးပိုင်းအိမ်တွေတော်တော်များများမှကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဓလေ့လေးတစ်ခုပါ။ ဂျပန်ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးတဲ့ ဓလေ့တွေထဲက အထင်ကရလေးကိုရွေးပီးရေးပါရစေ။
သူတို့ရဲ့နှစ်ကူးကို ညဘက်၁၂နာရီမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဘုရားကျောင်းတွေမှာ ခေါင်းလောင်းကို ၁၀၈ကြိမ် ထိုးကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းထိုးဖို့တန်းစီနေတဲ့ ဧည့်ပ၇ိသတ်ကလည်း များပါတယ်။ နာမည်ကြီးကျောင်းတွေဆိုပိုပီးလူကျပ်ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၁ရက်နေ့ရဲ့ မနက်စောစော ကိုတော့ သူတို့ အခေါ်
Hatsu hinode လို့ခေါ်တဲ့ ပထမဆုံးထွက်တဲ့နေမင်းကို ပူဇော်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ ဓလေ့ရှိပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး ကီမိုနိုလေးတွေ ၀တ်ပြီး ဘုရားကျောင်း နတ်ကျောင်းတွေမှာလာပီးဆုတောင်းကြပါတယ်။
ကဲသူတို့ ဘာစားကြသလည်း။ ကျွန်မတို့တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်ညမှာ မယ်ဇလီဖူးသုတ်စားသလို သူတို့ လည်း သူတို့ ရဲ့ နှစ်ကူး ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာ toshikoshi soba လို့ ခေါ်တဲ့ ပန်းဂျုံခေါက်ဆွဲ စားပါတယ်။ toshikoshi ဆိုတာကတော့ နှစ်ကိုကျော်ဖြတ်ခြင်း soba ကတော့ အားလုံးသိကြမယ့် ပန်းဂျုံကိုခေါ်တာပါ။ ကုန်လွန်တော့မယ့်နှစ်ရဲ့ မကောင်းမှု့ ပင်ပန်းမှု့ တွေ ကိုကျော်လွန်ပီးကောင်းမွန်တဲ့နှစ်သစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ နောက်ခေါက်ဆွဲက ရှည်တယ်လေ ။
ခုနောက်ပိုင်း အလွယ်တစ်ကူ စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းလာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ osechi ryori လို့ ခေါ်တဲ့ နှစ်သစ် ၃ရက်၎ရက်လုံးအတွက် ကြိုတင်ချက်ပြုတ်ပီး ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေပါပဲ အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်းစေမယ့် အစားအသောက်ဆိုပီး တစ်ခုဆီကို ဂျပန်အမေကြီးရှင်းပြဖူးတယ် ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာတော့ အိမ်ကမေမေ ဘယာကျော်ကို ဘေးဘယာကျော်အောင် ဆိုပီးဘုရားတင်သလိုပဲ လို့ သဘောပေါက်ဖူးတယ်။
အစဉ်အဆက်အိမ်ရဲ့ တံဆိပ်ပါတဲ့ ယွန်းထမင်းဘူးအဆင့်ဆင့်ထဲမှာ မနက်စာညစာ ကို ညီတူမျှတူခွဲပီးလှလှပပစီတန်းထည့်ထားတာကလည်း သူတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့စားတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုပါပဲ။ ဟင်းအမယ်က အနည်းဆုံးမရှိဘူးဆို ၁၅မျိုးလောက်တော့ရှိတယ်။ခုနောက်ပိုင်းမှာအသင့်ပြင်ဆင်ပီး နှစ်ကူးဟင်းတွေကလည်း စူပါမားကတ်မှာ အတော်ရောင်းကောင်းပါတယ်။
၀ါသနာပေါ့ ကျွန်မတို့ ကမုန့် ဟင်းခါးထုပ်ကိုချက်စားတယ် အိမ်ကမေမေတို့ က ကိုယ်တိုင်ငါးကိုဆီသပ် မုန့် ဟင်းခါးချက်သလိုပေါ့။
မှတ်ချက် ပို့စ်တင်ခြင်တာအရမ်း ခုတစ်လော လုံးဝမနားရသေးဘူး ဆရာဖြစ်သူခိုင်းတာတွေများလို့ 
စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာနဲ့ အိပ်ချိန်ကလွဲလို့ မခွာရဘူး ခုလေးတင် meeting ပီးတယ် . ရေးထားတာလေးတွေ နည်းနည်းပြင်တယ် ၃ရက်နေ့ ထိပိတ်ရက် ရတယ်။
ဘော်ဘော်တွေ မကြီးတွေ ကိုကြီးတွေ ကို နှုတ်ဆက်ခြင်လို့ ပို့ စ်တင်လိုက်တယ်.
ကျန်းမာလန်းဖြာ ၀မ်းသာစရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ရှင်
ကဲ ကားဘီးတွေ ကို နှင်းတောထဲ မောင်းလို့ ရအောင် လဲထားတယ်…သဘောပေါက်…. ခရီးထွက်မလို့ 
ခရီးက ပြန်လာမှ ပို့ စ်ထပ်တင်မယ် ……တာ့တာ့
စာလုံးပေါင်းမှားရင် သည်းခံဖတ် ............
Photos from google..
Posted by ကြည်ကြည် at 11:51 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 24, 2010 at 1:27 AM
အလှဆုံးအချိန်ကို ၂ နဲ့ စားထားတဲ့ အသက်လောက်ပဲ ကြည့်ချင်တော့တယ်
မိုးယံ December 24, 2010 at 7:45 AM
ွှအလှဆုံးအချိန်တွေ ရောက်ရင် ပိုင်ရှင်တွေ ချိကုန်ကြဘီ.. ဟွန့်.
ဆုပေးတဲ့သူလဲ ထပ်တူ ကျန်းမာလန်းဖြာပါစေ..
PhyoPhyo December 31, 2010 at 2:20 PM
KOBE LUMINARIE အနုပညာလက်ရာမြောက် မီးထွန်းပွဲ...
အတွေ့စားမှာလား အငွေ့စားမှာလား အမြင်နဲ့စားမှာလား......